ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ချိုသာပြီး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေတဲ့ နေ့လည်စာကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ?? - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ချိုသာပြီး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေတဲ့ နေ့လည်စာကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ??
နေ့လည်စာအတွက် ခရင်မ်အပြည့်ပါဝင်တဲ့ ထောပတ်သီးကို ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ အနှစ်ပြုလုပ်ပြီး ပေါင်မုန့်နဲ့တွဲဖက်ပြီး ဆန်းဒ်ဝှစ်ခ်ျပြုလုပ် စားသုံးနိုင်ပါတယ်။
ဆူပါမားကက်တွေမှာ ၀ယ်ယူနိုင်တဲ့ တိုဟူးပြားကို မြေပဲဆော့စ်အနှစ်နဲ့ ဖြည့်ပြီး တိုဟူးကော်ပြန့်လိတ်ပြုလုပ် စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသီးအရွက်တွေနဲ့ တွဲဖက်စားသုံးနိုင်ပါတယ်။
ကြွပ်ကြွပ်ရွရွရှိတဲ့ မုန်လာဥ၊ သခွားသီးစတာတွေနဲ့ ကြက်ဥနဲ့တွဲဖက်ပြီး အစုံသုတ်စားလို့ရပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ဘီစကစ်အနည်းကိုလည်း တွဲပြီးစားလိုက်ရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ နေ့လည်စာဖြစ်လာမှာပါ။
တူနာငါးမဟုတ်ဘဲ ဆယ်လမွန်ငါးကိုလည်း ပြောင်းလဲစားသုံးကြည့်သင့်ပါတယ်။ သံပုရာသီး၊ ကြက်သွန်၊ သံလွင်ဆီလေး ထည့်သုတ်လိုက်ရင် အရသာရှိတဲ့ အသုတ်တစ်ပွဲဖြစ်သွားမှာပေါ့။
ပန်းပွင့်စိမ်း၊ ၀က်ပေါင်ခြောက်နဲ့ ပါစတာအရောအစပ်
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အရသာလည်းရှိတဲ့ နေ့လည်စာနောက်တစ်မျိုးကတော့ ပန်းပွင့်စိမ်းနဲ့ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်တို့ပါဝင်တဲ့ ၀က်ပေါင်ခြောက်၊ ပါစတာ အရောအစပ်ပါပဲ။